> Resource > Video > Sida loo hagaajiyo tayada Video
Waxaan leeyahay qaar ka mid ah videos qiimo iyo filimaan ka weyn. Laakiinse iyagu ma ay tahay arrin taam u watch: tayada waxaa bad- image waa tashwiish iyo video waa mugdi. Sidee baan u hagaajin kartaa nooca iyaga ka mid ah?
Si loo hagaajiyo tayada video, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ayaa diyaar u ah si ay u caawiyaan. Tani waxay awood leh qalab video tafatirka waxaa ka buuxa doorasho kala duwan si taxaddar leh loo qorsheeyay sare si ay u caawiyaan uu idiin ka bixiyo heer xirfadeed video image iyo saamaynta dhawaaqa. The interface fududahay in la isticmaalo awood kuu siinayaa in ay sameeyaan edit sare sanamyo, videos iyo files audio ku qasabno yar. Isku day inaad ka soo editor video hadda si fudud loo hagaajiyo tayada video aad. Waxaad marka hore kala soo bixi kartaa raad lacag la'aan ah:
1 Import files warbaahinta barnaamijka
Fur Filmora Wondershare ah (markii hore Wondershare Video Editor), kala doorto "16: 9" iyo "4: 3" muuqa inuu ku soo bilowdo mashruuc. Markaasuu ku dhacay "Import" in shuban files deegaanka. Waxa kale oo aad ku xidhi kartaa qalab aad adigoo riixaya badhanka Import ama kaliya jiidi-iyo-hoos u files ee barnaamijka. Video Editor Ka qabtaa sawirada, video iyo files audio la dhibaatana ma leh.
2 Hagaajinta tayada video
Ka dib markii loo dhoofiyo oo dhan files warbaahinta barnaamijka, jiididda iyo iyaga hoos u ah kuwan raadkaygay kala ah waqtiga. Ku qor "Edit" xaq-guji clip warbaahinta aad u baahan tahay si sare loogu qaado. Waxaa tahay dhowr goobaha aasaasiga ah sida beddesha, dalagga, xawaaraha iyo qabsato. Halkan waxaad si fudud u beddeli karaan farqiga, saturation, nuur iyo daran. Edit Audio waa u fududahay. Riix fursadaha column iyo set Audio sida aad jeceshahay. Halkan waxa aad ka bedelno mugga wax soo saarka, libdhi in, libdhi baxay iyo garoonka.
Inta lagu guda jiro habka this, waxaad ka daawan kartaa saameyn-waqtiga dhabta ah ee suuqa kala Falanqeynta ah. Haddii qabsiga waxaa ku filan, riix "celi" ee qaybta hoose ee suuqa kala dib ugu soo laabtaan interface ugu weyn.
Ka sokow in, Video Editor kuu ogolaanaya in aad si aad u codsato sida diirada kala duwan ee hal mar, si loo hufay wax soo images of video habka aad rabto. Waxaa laga yaabaa inaad guji Saamaynta tab iyo jiidi saamaynta filter cajiib ah in waqtiga.
3 Save ama wadaagno video
Ka dib markii la habeeyo tayada video ah, riix badhanka Play in ay ku eegaan video cusub. Haddii aad ku qanacsan tahay natiijada, ku dhacay Abuur ah si loo badbaadiyo ama la wadaagto aad buuxisay video. Waxaad tegi kartaa tab Qaabka ay u encode video ah qaababka video kala duwan sida ay jecel yahay, ama dhoofin video in ay sawiro gacanta loogu jecel yahay iyo kombuyuutarrada gacanta ku tab Device ah. Haddii aad rabto in aad ku gubi DVD ah, maraan si tab DVD ah. On top of in, sidoo kale waxa aad la wadaagi karaan online iyada oo tab YouTube ama Facebook.
Waxaad daawan kartaa tutorial video hoos ku qoran: